Privacy & Cookie ပေါ်လစီ - Ningbo MH
နိုဝင်ဘာလ 9, 2014
ကျနော်တို့ကိုအဘယ်သူဖြစ်ကြပြီးဒီ privacy ကိုမူဝါဒ၏ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?
ဒါဟာ privacy ကိုမူဝါဒအ MH စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ( "MH", "ကျွန်တော်" သို့မဟုတ် "ကျွန်တော်တို့ကို") သင်ဤ website ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသငျသညျအကြှနျုပျတို့အားပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ကာကွယ်ပေးသည်ကိုဘယ်လို။ မှထွက်သတ်မှတ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသူ့ဟာသူသို့မဟုတ်သောအခါကြှနျုပျတို့ကျင်းပရန်သို့မဟုတ်ကျင်းပရန်များပါတယ်သောအခြားသတင်းအချက်အလက်နှင့် တွဲဖက်. များတွင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ, တစ်ဦးလူနေမှုတစ်ဦးချင်းစီသကဲ့သို့သင်တို့ကိုဖေါ်ထုတ်နိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များသည်။ ဒါဟာ privacy ကိုမူဝါဒကကျနော်တို့ကိုသုံးပါနှင့်သင်ဤ website ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုရှင်းပြထားသည်။
သင်ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒသို့မဟုတ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ "ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်" အောက်ကအပိုင်းကိုသွားပါ။ ကြောင်းအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာထွက်ထားကြ၏။
သင်ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒနှင့်အညီအသုံးပြုသောခံရသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုသဘောတူမထားဘူးဆိုရင်သင်ကချက်ချင်းဤ website ကို အသုံးပြု. မှရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ သင်ဤ website နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏အမိန့်ကို process စေခြင်းငှါဒါသုံးစွဲဖို့မှတ်ပုံတင်စေခြင်းငှါဒါကြောင့်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတင်ပြမဟုတ်လျှင်သင်ဤ website ကိုတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဆီကကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
အဘယ်အရာကိုဒီ privacy ကိုမူဝါဒ updates များကိုကော?
ငါတို့သည်ဤစာမကျြနှာကို update များကအခြိနျမှနျမှဒီ privacy ကိုမူဝါဒအပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ သင်မှန်မှန်ဒီစာမျက်နှာပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲများကဒီ privacy ကိုမူဝါဒကြပြီပြီးနောက်ဤ website ၏သင့်ဆက်လက်အသုံးပြုမှုသင်သည်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများဖတ်ပါနှင့်လက်ခံခဲ့သည်ပြီညွှန်ပြခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်ဤ privacy ကိုမူဝါဒမဆိုအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူမပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့အားအပြောင်းအလဲများကိုဆိုလိုလျှင်သင်သင်တို့သည်နောက်တဖန်ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာကိုသုံးပါသောလမျးနှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်လျှင်သင်သည်ဤ website ကိုမသုံးသင့်ပါတယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဖောက်သည်များ၏တဦးတည်း (ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်သည်များနှင့်စားသုံးသူနှစ်ဦးစလုံးလည်းပါဝင်သည်) ဖြစ်ကြပြီးသငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် (ဥပမာ) အပါအဝင်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့စာမျက်နှာများကိုသုံးစွဲဖို့မှတ်ပုံတင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသူများစာမကျြနှာမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသနားတော်မူပါလိမ့်မယ် အကယ်. ။ ကျနော်တို့ကမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်သင်တို့ထံကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းမည် အွန်လိုင်းသာသနာကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်; သငျတို့သထံသို့စေလွှတ်ခံရဖို့တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခွင့်ပေးရန်သင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူနိုင်ရန်အတွက်။ ငါတို့သည်သင်တို့အနေဖြင့်စုဆောင်းထားတဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်နိုင်ပါသည်:
(ထိုကဲ့သို့သောစာတိုက်နှင့် e-mail လိပ်စာ (es) နှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ် (s) ကိုကဲ့သို့) သင့်အမည်, မွေးဖွားနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ၏ရက်စွဲကို;
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်;
(သင်တက်ထားမည်ဖြစ်သော) (ကုတ်အင်္ကျီအတူသင်တို့သည်တံ့သော) သင့် MH အသုံးပြုသူ ID နှင့်သငျသညျ password ကို။ သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူ ID နှင့် password ကိုသငျသညျ) ဒီ website ကိုသုံးစွဲဖို့ login အခါတိုင်းပေးဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်;
သင့်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဆက်အသွယ်ဦးစားပေးများနှင့်သဘောတူညီချက် (နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အောက်ကအပိုင်း "တိုက်ရိုက်စျေးကွက်" ကိုဖတ်ရှုပါ);
သင့်ရဲ့အကြွေး / debit card ကိုအသေးစိတျ; နှင့်
အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များပါဝင်နိုင်ရာ (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်သည်စပ်လျဉ်းသာ) သင့်လုပ်ငန်းအသေးစိတ်နှင့်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေး။
ဤစာရင်းတွင်ပြည့်စုံစေ့စပ်မပေးနှင့်အနာဂတျမှာ updated နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာငါတို့သည်သင်တို့ထံမှလက်ရှိစုဆောင်းစေခြင်းငှါပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တချို့၏မျှတသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
သင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျနော်တို့ပူဇော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်အတူတူပင်တိုးတက်အောင်နှင့်ဆက်စပ်သောစျေးကွက်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးအမြင်နှင့်အတူဤ website ကိုကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ (ကြှနျုပျတို့သညျဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အသငျသညျကိုယျ့ကိုယျကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်တတိယပါတီများတောင်းဆိုနိုင်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ - အောက်တွင်) "ကျနော်တို့နှင့်အတူဤအချက်အလက်ဝေမျှကြဘူးဘယ်သူလဲ" ဟုအဆိုပါအခန်းကိုဖတ်ရှုပါ;
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှငျ့သငျကျွန်တော်တို့ကိုတင်သွင်းထားတဲ့မဆိုဆက်သွယ်ရေး, စုံစမ်းရေးသို့မဟုတ် application ကိုတုံ့ပြန်ရန်,
သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပေးပို့ (သို့သော် အကယ်. သင်ဤခွင့်ပြုရန်အသင့်လျော်သည့်သဘောတူညီချက်ပေးတဲ့အခါမှသာ - အောက်ကအပိုင်း "တိုက်ရိုက်စျေးကွက်" ကိုရည်ညွှန်းပါ) ရန်, နှင့်
ဤစာရင်းတွင်ပြည့်စုံစေ့စပ်မပေးနှင့်အနာဂတျမှာ updated နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်စုဆောင်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရသောအဘို့သည်လက်ရှိရည်ရွယ်ချက်များတချို့၏မျှတသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်သို့မဟုတ်ဥပဒေသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကထုတ်ဖော်ရန်ခွင့်ပြုထားကြသည်မဟုတ်လျှင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အဖြစ် မှလွဲ. ကျနော်တို့တတိယပါတီ (အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအဓိပ္ပာယ်) ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလွှဲပြောင်းထုတ်ဖော်, ရောင်းချ, ဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်ငှားရမ်းမည်မဟုတ်။
ကျနော်တို့ (ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကလွှဲပြောင်းယူခံရဖို့သောဖြစ်ရပ်အတွက်ဥပမာ) ကြှနျုပျတို့၏တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဘယ်မှာလိုအပ်သောအခြားသူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ရောင်းချလိမ့်မည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤလုပျဆောငျသငျ့ကျနော်တို့ကအက်ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်သေချာပေသည်။
ကျနော်တို့ဥပဒေရေးရာအာဏာပိုင်များ (ဆိုလိုသည်မှာတရားရုံး, ခုံရုံး, ရဲသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုများ) ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိဖို့ဥပဒေသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအားဖြင့်မလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အမိန့်ကိုဤ website ၏သမာဓိကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့် subscriber များအားများ၏အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့မဆိုထိုကဲ့သို့တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အခွန်များသို့မဟုတ်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အစိုးရအာဏာပိုင်များထံသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သည်အခြားအခြေအနေများတွင်ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဥပဒေကြောင်းအရအာဏာပိုင်များထံသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ပြီးထုတ်ဖော်ယင်းအက်ဥပဒေအောက်တွင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အပျသညျဟုမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်အဘို့အစစ်မှန်သောအကြောင်းပြချက်ရှိကွောငျးဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလွန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအရာများ၏ MH အုပ်စုအားလုံးကုမ္ပဏီများ, အသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့သာကျွန်တော်တို့ကိုန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်သူတို့ကိုခွင့်ရှိသူများအခြားကုမ္ပဏီများမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ရှောက်သွားလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါတို့ဖောက်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်ပြင်ပကုမ္ပဏီများသည်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောသောအခွအေနရှိပါလိမ့်မယ်။ ယင်းအက်ဥပဒေသူတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောတို့စိတျထဲမှာအချိုးကျ bearing သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုခဲ့ကြသည်ပေးအောက်မှာထိုသို့သောထုတ်ဖော်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သင်တို့အနေဖြင့်စုဆောင်းသောဒေတာများမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးသွင်းတစ်ဦးအတွက်အလုပ်လုပ်သူကိုတရုတ်ပြင်ပမှာ operating န်ထမ်းများကလုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောန်ထမ်းများ, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုကိုင်ပြီးအခြားအမှုအရာတို့တွင်အမိန့်၏ပြည့်စုံခြင်း, အပြောင်းအလဲနဲ့သို့မဟုတ်သင့်ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ထောက်ခံမှုန်ဆောင်မှုများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင်စေ့စပ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုတင်ပြခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဤလွှဲပြောင်း, သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့သဘောတူသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ data တွေကိုလုံလုံခြုံခြုံနှင့်ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒနှင့်အညီပြုမူဆက်ဆံကြောင်းသေချာစေရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်သောအားလုံးခြေလှမ်းများယူပါလိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျတို့သညျ (သို့မဟုတ်ရှိရာသင်တို့ကိုရွေးကောက်သကြပါပြီ) သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုဝင်ရောက်ဖို့ဖွထားတဲ့ password ကိုပေးပြီအဘယ်မှာရှိ, သင်လျှို့ဝှက်ဒီစကားဝှက်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အတာဝန်ရှိသည်။ ကျနော်တို့မည်သူမဆိုအတူ password ကိုမျှဝေဖို့မဟုတ်ပါဘူးသင်မေးကြည့်ပါ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, အင်တာနက်ကနေတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ဂီယာလုံးဝလုံခြုံဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတတျနိုငျဆုံးကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုမှကူးစက်သည်သင်၏အချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကိုအာမခံချက်မပေးနိုငျ; မည်သည့်ဂီယာသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်ရရှိထားပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားမှတင်းကျပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုံခြုံရေး features တွေကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုသင်တရုတ်ပြင်ပကနေဒီ website ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက?
သင်တရုတ်ပြင်ပကနေဒီ website ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကအခြားဥပဒေများသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့တရုတ်အတွင်းကနေဒီ website ကို operate ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏တိုင်းပြည်ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများဘာသာရပ်မဟုတ်နှင့်ဤ privacy ကိုမူဝါဒကသူတို့အားဥပဒေများနှင့်အတူလိုက်နာရမည်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ဤအနေအထားနှင့်အတူပျော်ရွှင်နေကြသည်မဟုတ်လျှင်သငျသညျအကြှနျုပျတို့အားသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များတင်ပြသင့်ပါဘူး။
အဘယ်အရာကို anonymised သတင်းအချက်အလက်ကော?
(တစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည်ဖော်ထုတ်မရနိုငျဆိုလိုသည်မှာဒါ) ကြှနျုပျတို့သလည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စုစုပေါင်းအတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါနှင့်ထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။ သငျသညျဖော်ထုတ်သို့မဟုတ်ကနေသက်သေပြလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအချက်အလက်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒမအက်ဥပဒေမဟုတ်လျှောက်ထားမည်ဟုဆိုလိုသည်။
, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အရှုံးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့အက်ဥပဒေအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီ, ဒီအဆုံးမှသင့်လျော်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်, အဖွဲ့အစည်းနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစီအမံယူပါ။ ဤသည် (ဥပမာ, ဒီ website ကို encrypt လုပ်ထားတဲ့ပါလိမ့်မည်ဒီ site နှင့်ထံမှလုံခြုံတဲ့ site နှင့် transmission ကိုဖြစ်ပါတယ်) encryption ကိုပါဝင်နိုင်သည်။
သင်ဤ website နှင့် / သို့မဟုတ်သင်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူထူထောင်မဆိုအကောင့်အချို့စာမျက်နှာများကိုရန်သင့်သုံးစွဲနိုင်ဆက်စပ်မူသောသင်တို့အသုံးပြုသူ ID နှင့် password ကို၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းထားတာဝန်ရှိသည်။ သင်ကတူညီတဲ့စပ်လျဉ်းဖြစ်ပေါ်သမျှသောလှုပ်ရှားမှုများအဘို့တာဝန်လက်ခံရန်သဘောတူသည်။ သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူ ID သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုသုံးစွဲဖို့အခြားလူအခွင့်မပေးသင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းသင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူ ID သို့မဟုတ် password ကိုခိုးယူခဲ့ကြပေမည်ယုံကြည်လျှင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော "ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နည်း" ဟုအဆိုပါအခန်းတွင်အသေးစိတ်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးအားဖြင့်လူသိများသင်၏ login အသေးစိတ်ကိုဖြစ်လာ၏ရလဒ်အဖြစ်ဤ website တွင်သင်၏ login အသေးစိတ်ကိုသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်မှုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလျှင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်မဟုတ်လျှင်ကျနော်တို့သင်တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်းကအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံတဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်းသိထားရန်အရေးကြီးပါသည်။ အင်တာနက်ကတဆင့်ဆက်သွယ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအခြားလူတို့ကကြားဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်ဤ website ကိုတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစလှေတျတျောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးအာမခံလို့မရပါဘူး။ သင်ကဤ website ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာအသုံးပြုလက်ခံပါ။
ဒီ website 13 ၏နှစ်အောက်နှင့်ကျွန်တော် 13 ၏နှစ်အောက်အရွယ်မရောက်သေးသူဤဆိုဒ်အားဖြင့်ငါတို့အားမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတင်ပြမတောင်းဆိုပါကဲ့သို့သောအရွယ်မရောက်သေးသူအားဖြင့်အသုံးပြုမှုအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ ကျနော်တို့မိဘများနှင့်အုပ်ထိန်းသူများအအင်တာနက်ပေါ်မှာလုံလုံခြုံခြုံနဲ့တာဝန်သိသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုကိုင်တွယ်ရန်သူတို့သားသမီးသတိပေးကြောင်းအကြံပြုပါသည်။
ဒီ website အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များလင့်များဆံ့ပါဘူး။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပရှိအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များဒီဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လင့်ထားသည်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ဒီလိုအခြားသော website ၏ privacy ကိုအလေ့အကျင့်များနှင့်အကြောင်းအရာများကိုတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျကိုသတိပွုနှင့်မေးခှနျးအတှကျက်ဘ်ဆိုက်သက်ဆိုင်သည့် privacy ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကွတ်ကီးနှင့် web beacons
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင် "cookies များကို" သုံးနိုင်ပါသည်။ ကွတ်ကီးကြှနျုပျတို့၏ website ကိုသင်တို့ရှေ့မှာကြှနျုပျတို့၏ website လည်ပတ်ခဲ့ကြပြီအသိအမှတ်မပြုနိုင်သောဆိုလိုတယ်ကြောင်းကိုသင်၏ hard drive ဒါမှမဟုတ် browser ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ထားတဲ့ဒေတာဖိုင်များကိုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပိုမိုလွယ်ကူသင်ဤ website တွင်သင့်ရဲ့ဦးစားပေးထိနျးသိမျးဖို့အဘို့လုပ်, သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုဖို့ကိုဘယ်လိုမြင်နေအသုံးပြုပုံငါတို့သည်သင်တို့၏ဦးစားပေးကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ, သငျသညျ, ကိုရွေးချယ်သင့် browser ကနေ cookies တွေကို disable နှင့်လက်ရှိသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းထားတဲ့အားလုံး cookies များကိုဖျက်ပစ်သင့်ပါတယ်နိုငျသညျ။ Microsoft Internet Explorer တွင်, ဒီ 'Tools များ / Internet Options ကို' 'ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သင့်ရဲ့ privacy setting များကိုပြန်လည်သုံးသပ်သို့မဟုတ်' cookies များကိုဖျက်ပစ် '' ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
သင်သည်သင်၏ browser ကိုဖွင့် menu ပေါ်တွင် '' အကူအညီနဲ့ '' ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အထူးသဖြင့်ဘရောက်ဇာကိုအဘို့ဤလုပ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျ cookies တွေကို disable လျှင်သို့သော်လည်းငါတို့၏ website features တွေအများအပြားအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
ငါတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သောမြှင့်တင်ရေးအီးမေးလ်များအတိုင်းဤ website တွင်အသုံးပြုဖို့နှင့် / သို့မဟုတ်ဤ website တွင်မှတ်ပုံတင်ဖို့ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးမှာ "web beacons" အဖြစ်လူသိများအီလက်ထရောနစ်ပုံများ, သုံးနိုင်ပါသည်။ web-beacons များသောအားဖြင့် cookies တွေကိုနှင့် တွဲဖက်. အလုပ်လုပ်ကြပြီးအလားတူရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
ကျနော်တို့ cookie ကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်အရာကိုတစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အတူ mh-chine.com အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှာအသုံးပွုတဲ့ကွတ်ကီးများကိုတစ်ဦးအပြည့်အဝစာရင်းထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အင်္ကျီသင့်အကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန် cookies များကိုမသုံးပါလိမ့်မယ်။
mh-chine.com Google Analytics, Google ကပေးအပ်တဲ့ web analytics ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်, Inc က Google Analytics မှကြှနျုပျတို့၏ website ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်အသုံးပြုသူလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အစီရင်ခံစာများ compile နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦး cookie ကိုသတ်မှတ်။
Google ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆာဗာများကိုပေါ် cookie ကိုတို့ကကောက်ယူသတင်းအချက်အလက်များသိမ်းဆည်းပေးသည်။ Google ကလည်းပညတ်တရားအားဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ရှိရာတတိယပါတီများမှမှဤအချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီများမှ Google ရဲ့ကိုယ်စားသတင်းအချက်အလက်ကို process ရှိရာ။ Google က Google ကကျင်းပသည့်အခြားဒေတာတွေနဲ့သင့်ရဲ့ IP address ကိုပေါင်းသင်းမည်မဟုတ်။ mh-chine.com သုံးပြီးဖြင့်, သင်သည်ထုံးစံ၌ Google ကသင့်အကြောင်းအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ရန်နှင့်အထက်ထွက်သတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သဘောတူသည်။
third party cookies တွေကို
mh-chine.com လည်းသူတို့ထောက်ပံ့သောဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ်တော်မူနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားပေါ်မှာငါတို့ website တွင် cookies များကိုသတ်မှတ်ထားသူကိုပေးသွင်းတဲ့အရေအတွက်ကအသုံးပြုသည်။ mh-chine.com နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ချင်းစီကိုအောက်တွင်ပေါ်လာပါအသုံးပြုသည်ပေါ်အသုံးပြုကြသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်တတိယပါတီ cookies တွေကိုစာရင်းတစ်ခု။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့အားပေးတျောမူသောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုနေ့စွဲထဲကသို့မဟုတ်တိဖြစ်လာပါလျှင်အောက်တွင် "ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပုံ" ကိုအပိုင်းတွင်အသေးစိတ်သုံးပြီးအီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်တိုင်အနားမှာသိစေပါ။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ အကယ်. ကြှနျုပျတို့သညျဤ website ၏သက်ဆိုင်ရာစာမကျြနှာပျေါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလက်ခံရရှိရန်သင့်သဘောတူညီခကျြရှာကြလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ (သက်ဆိုင်သောဥပဒေများအောက်တွင်လိုအပ်သောအရာကိုပေါ် မူတည်. ) ဒီလက်ခံရရှိ-ဖယ်ထုတ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
တယ်လီဖုန်းဖြင့်သို့မဟုတ် e-mail,, SMS အသံစာကိုသို့မဟုတ်အခြားအီလက်ထရွန်းနစ်နည်းလမ်းများကစေလွှတ်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်မှာတော့ကျနော်တို့သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းအားဖြင့်နောက်ထပ်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးငြင်းဆန်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မယ်။ သငျသညျနောက်ထပ်အီလက်ထရွန်နစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးငြင်းဆန်လျှင်, ငါတို့သည်သေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ (s) ကိုမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားပစ်မည်မဟုတ်ပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်နိုင်သောအကြှနျုပျတို့သညျသငျ့စိတျပြောင်းလဲပြီသတိပြုပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံသငျသညျကိုဆက်သွယ်မရကြောင်းသေချာစေရန်အလို့ငှာတစ်ဖိနှိပ် form မှာ (သင့်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုအပါအဝင်) သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုကိုင်ထားမှဆက်လက်ခြင်းအလိုငှါကိုဆိုလိုသည်။
အခြားမည်သည့်အချိန်ကသင်ရွေးချယ်ထွက်စေခြင်းငှါသည့်အချိန်တွင်မဆိုတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလက်ခံရရှိအကြောင်းကိုသငျ့စိတျကိုပြောင်းလဲရန်ဆန္ဒရှိလျှင်။ သငျသညျကိုအောကျတှငျ "ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ကဘယ်လို" ဒီ website ကတဆင့်သင့်ရဲ့ဦးစားပေးကို update သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းဤသို့ပြုသို့မဟုတ် post ကိုအပိုင်းအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြု. လိမ့်မယ်။
သင့်အကောင့်များနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ retention ကို၏ရပ်စဲ
ယင်းအက်ဥပဒေနှင့်အညီငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားပေါ်မှာ process ရာကိုမဆိုတတိယပါတီများအားဖြင့် (s) ကိုသက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ရှည်လိုအပ်သောထက်မစောင့်နေသည်သေချာပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏အကောင့်အဆုံးသတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်သင့်အကောင့်ကိုပယ်ဖျက်လျှင်လျှင်, ငါတို့သည်အဖြစ်မကြာမီကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ပိတ်လိုက်မည်နေသမျှကာလပတ်လုံးမည်သည့်ဥပဒေရေးရာစိန်ခေါ်မှုများသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာများ၏အမှု၌လိုအပ်သောဖြစ်သကဲ့သို့အဘို့အနောကျပိုငျးတှငျသာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်စောင့်ရှောက်မည်။ ထိုကာလပြီးနောက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်အတွက်နှိမ်နင်းပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ (s) ကိုဖျက်ပစ်ပါ။
သတင်းအချက်အလက်မှ Access ကို
အဆိုပါအက်ဥပဒေကိုသင်အကြောင်းကိုကျင်းပသတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ access ကိုသင့်ရဲ့ညာဖက်အက်ဥပဒေနှင့်အညီကျင့်သုံးနိုင်ပါသည်။ မဆို access ကိုတောငျးဆိုခကျြအကြှနျုပျတို့သညျအကွောငျးကိုကိုင်သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့၌အကြှနျုပျတို့၏ကုန်ကျစရိတ်တွေ့ဆုံရန်£ 10 တစ်ကြေးမှဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
Ltd. , Ningbo MH စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Co. ,
Privacy & Cookie ပေါ်လစီ Home ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား --Threads --Zippers --Ribbon & တိပ် --Ropes --Laces --Buttons --Interlining တစ်ခုကိုချုံ့ခြင်း --Tassel & မြိတ် / --Tailoring ပစ္စည်းများ --Garments & ဆက်စပ်ပစ္စည်း --Sewing စက် & အစိတ်အပိုင်းများ --Fabric --Others ကြှနျုပျတို့အကွောငျး --MH ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် --MH စက်မှုဇုန် --MH သမိုင်း --Trade ရှိုးများ --Our ကိုယ်စားလှယ် --Image Galleries --Video အယ်လ်ဘမ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ --Office တည်နေရာ --Feedback အဝန်း --Blog --App --ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ